Fanomezana natokana ho an'ny mpilalao ao aminy ny FC Barcelona dia iPhone 7 | Vaovao IPhone
Tonga ny Krismasy, fanahy sy fanomezana. Tsy maintsy nieritreritra ny filohan'ny FC Barcelona izany, ary izany no Josep María Bratomeu dia tsy nanana hevitra vaovao hafa raha tsy ny manome iPhone 7 ho an'ny mpilalao rehetra ao amin'ny ekipa, fanomezana kely misolo ny harona Krismasy nentim-paharazana izay toa tsy misy dikany na tsy misy dikany. Ary ny zava-misy dia tsy fahita firy ilay kintana fanatanjahan-tena na amin'ny faritra hafa izay tsy hitantsika mandeha miaraka amin'ny iPhone vaovao, tsy haintsika raha noho ny antony mahazatra na noho ny orinasa Cupertino mamatsy azy ireo, saingy zavatra iray izany efa elaela izay no nisy. Farafaharatsiny farafaharatsiny mba hahaliana antsika ilay "fanomezana".
Ary ny mahamarina azy ireo dia atleta mandoa vola an-tapitrisany maro ny euro, ary iPhone 7 dia fitaovana iray natomboka tamin'ny tsena tamin'ny volana septambra. Eto isika rehefa manontany tena ny amin'ny maha-zava-dehibe ilay fanomezana, satria manana fisalasalana betsaka momba ny hoe iza amin'ireo mpilalao baolina kitra amin'ny ekipa te hanana iPhone 7 tamin'izany fotoana izany ve no efa manana izany. Raha ny tena izy, ny mpilalao toa an'i Neymar dia hita matetika miaraka amin'ny iPhone, ka io no faharoa azony.
Ny harona Krismasy dia pitsopitsony mahazatra amin'ny tontolon'ny asa Espaniola, ary mety ho nisy dikany bebe kokoa noho ny fanomezana mpilalao finday miliardera hanana finday io. Amin'izany fomba izany, ny naman'i marca hesorin'izy ireo ho "redundant" ny fanomezana natolotr'i Bartomeu ho an'ireo zanany tanora, ary raha ny marina dia mety marina ny azy. Na dia nomeko Apple Watch aza izy ireo, fitaovana iray mifantoka amin'ny fanatanjahantena sy ny fanaraha-maso ny fahasalamana, dia ho nisy dikany bebe kokoa izany fa ny iPhone 7, raha fintinina dia miditra lalina ao amin'ny mpiasan'ny FC Barcelona i Apple, na izany aza, ny orinasa Cupertino dia mbola tsy mpanohana ekipa lehibe any Eropa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fanomezana natokana ho an'ny mpilalao ao aminy ny FC Barcelona dia iPhone 7